Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » India na -agbasa ozi ọma » Steeti India ugbu a na -elekwasị anya na njem nlegharị anya na -eguzogide
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • India na -agbasa ozi ọma • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Sustainability News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a
Njem nlegharị anya Odisha
Njem nlegharị anya nke Odisha ụnyaahụ haziri webinar "Njem nlegharị anya maka itolite etolite - ntụgharị uche & ụzọ ịga n'ihu" webinar na FICCI, dị ka akụkụ nke ememme ụbọchị nlegharị anya ụwa 2021.
Ozi sitere n'aka Onye isi ala Odisha gosipụtara mkpa ọ dị maka njem nlegharị anya obodo.
Odisha na -ewepụta ọmarịcha ahụmịhe njem nlegharị anya.
Ka njem na njem na-aga n'ihu n'ọgụ ya megide ọrịa na-efe efe, njem nlegharị anya Odisha na-aga n'ihu ngwa ngwa maka mmepe agbakwunyere na mpaghara njem nlegharị anya nke steeti nke na-adigide onwe ya ma na-akwado mgbake akụ na ụba.
Onye isi ala Mazi Naveen Patnaik, Gọọmentị Odisha, zitere ozi na-egosipụta mkpa ọ dị maka mpaghara njem nlegharị anya na-ejide onwe ya. A gụrụ ozi ahụ n'oge webinar nke Maazị Sachin Ramchandra Jadhav, Director & Addl. Odeakwụkwọ, Ngalaba njem, Gọọmentị Odisha.
Ọ sịrị: “Odisha na -ewepụta ọmarịcha ọdọ mmiri nke ahụmịhe njem nlegharị anya. N'agbanyeghị ihe ịma aka nke ọrịa na -efe efe kpatara, anyị hụrụ ike na nkwụsi ike nke ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya na ụlọ ọrụ ile ọbịa gosipụtara n'ịmepụta nchekwa, nchekwa na ọnọdụ na -eme ka ndị njem nwee ike nyochaa Odisha - Ihe nzuzo kacha mma nke India.
“Isiokwu nke ụbọchị njem nlegharị anya nke ụwa 2021 bụ njem nlegharị anya maka uto. Ka mpaghara njem na njem nlegharị anya na-aga n'ihu n'ọgụ ya megide ọrịa na-efe efe, njem nlegharị anya Odisha na-aga n'ihu ngwa ngwa maka mmepe agbakwunyere na mpaghara njem nlegharị anya nke steeti nke na-adigide onwe ya ma na-akwado mgbake akụ na ụba. Njem nlegharị anya na -adigide na nke dị mkpa dị na Odisha.
“Njem nlegharị anya na -adigide ma na -arụ ọrụ dịịrị Odisha. Onyinye ndị bụ isi anyị bụ nke obodo. Ebumnuche ecotourism nke Odisha na-enweta mmeri nke ogige okike jisiri ike na-egosipụta ihe atụ a n'akwụkwọ ozi na mmụọ. Anyị ewepụtakwala atụmatụ Odisha Homestay Establishment 2021 iji mee ka e nwee ahụmịhe njem nlegharị anya site na ịrụ ọrụ ụlọ n'ụlọ ebe a na-achọpụtabeghị ihe dị iche iche nwere ọdịbendị bara ụba ka ọ na-akwalite azụmaahịa mpaghara na ịbawanye ebe obibi.
"N'ịgbalị anyị imebe Odisha dị ka ebe njem nlegharị anya nke ụkpụrụ ụwa, anyị na -arụsi ọrụ ike na mmepe akụrụngwa site na atụmatụ atụmatụ agbakwunyere nke ebe eburu ụzọ gafee steeti ahụ nwere oke maka isonye na ime obodo yana itinye ọnụ ahịa na -adigide na -agbakwunye ụlọ ọrụ dị ka ọrụ aka na nkwalite. ezigbo Odia Cuisine. ”
Maazị Jyoti Prakash Panigrahi, onye minista na -ahụ maka njem, asụsụ Odia, akwụkwọ na ọdịbendị, gọọmentị Odisha, kwuru na Odisha arụgharịala atụmatụ na ọhụụ maka njem nlegharị anya na gburugburu COVID mgbe ọ na -ahụ na nchekwa bụ ihe kacha mkpa.
N'igosipụta nnukwu ike njem na steeti ahụ, Maazị Panigrahi kwuru, sị: “Anyị nwere odida obodo pụrụ iche, ọdịbendị mara mma na saịtị nketa na steeti Odisha. Dịka onye isi ala anyị dị nsọ kwuru, gọọmentị anyị na -agba mbọ ilekọta ọnọdụ ihu igwe na ụdị nke obodo na -adigide. Steeti ahụ natakwara onyinye nturu ugo ọla ọcha maka “Ọchịchị Ọdịnihu Dị Mma Ọhụrụ” na 6th India Responsible Tourism Awards. Odisha bụ onye ndu njem na egwuregwu. Steeti ahụ na -ebutekwa n'ọtụtụ ngalaba ndị ọzọ dịka inye ụmụ nwanyị ike nke steeti ndị ọzọ na -eulatedomi. ”
Ọzọkwa, onye ozi ahụ kwusiri ike na njem nlegharị anya, amụma nke gọọmentị nke India, ma kwuo na steeti ahụ na -eme ihe niile ozugbo site na imepụta akụrụngwa dị mkpa achọrọ maka njem nlegharị anya na ngwaahịa ikpeazụ iji hụ na emechara nke a ma tinye ya n'ọrụ n'oge adịghị anya.